Ama-Mixers Wekhonkrithi Wokuzimela
Ungasigcina kanjani uhlelo lwamabhuleki lokuzilayisha ngokhonkolo ngokhonkolo?
Imiyalo yesondlo yohlelo lwamabhuleki lokuzilayisha ngokhonkolo kokhonkolo: Wonke umshayeli wokuzilayisha ngokhonkolo kakhonkolo uhlangabezane nesimo sokuvuma ngekhanda lapho ushayela. Okubizwa ngokunqekuzisa ikhanda ukuthi ibhuleki liqinile kakhulu, okuholela ekushintsheni okungazelelwe kwesondo i-Stop, umzimba ongaphansi kwe ...
Hlobo luni lokuzenzakalela kokulayisha ukhonkolo lungcono?
Kunabakhiqizi abaningi ngokwengeziwe bokuzilayisha ngokwabo okokuxuba ukhonkolo, futhi ukuhlukahluka komkhiqizo kuyinkimbinkimbi, okuletha ubunzima kubasebenzisi bokuthenga; 1.Ukuqonda amapharamitha wokusebenza kokuzilayisha ngokhonkolo ngokhonkolo, isibonelo, siyabona ukuthi sikhetha uhlobo luni lwenjini, malini ...
Ukugcinwa kwe-Excavator kwalezi eziyisithupha akukwazi ukukwenza!
1. Ingcindezi yamathayi iphezulu kakhulu Enqubeni yokusebenzisa i-excavator, ukugcinwa kwamathayi kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, ingcindezi yamathayi ingalungiswa ngokuya ngengcindezi ejwayelekile yomshini ekwindla nasebusika lapho izinga lokushisa lifanele. Kodwa-ke, ingcindezi ejwayelekile ayisi ...
Kuthiwani ngomkhuba "wokuvuma ngekhanda" ku-hydraulic cylinder ye-excavator?
Inqubo yokuxilonga i-hydraulic cylinder nodding ku-excavator 1. Lapho isilinda esibucayi se-excavator boom “nods” lapho siphakamisa, khetha isilinda esivamile se-hydraulic (njengebhakede isilinda) ukufaka esikhundleni se-oyili kanye namapayipi abuyisayo amasilinda amabili. Ngalesi sikhathi, sebenzisa i-buc ...
Yini okufanele inakwe lapho injini elayisha isondo isebenza?
1. Emva kokuba injini yesilayidi elayishwayo isiqalile, ilungele ukuqala lapho ingcindezi yamabhuleki ifinyelela ingcindezi yezokuphepha, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwamabhuleki ngesikhathi sokushayela. Iqinile Uma kwenzeka ukubhuleka okuphuthumayo, cindezela inkinobho ye-valve yebhuleki ephuthumayo neyokupaka (inkinobho ingakwazi kuphela ...
Yini okufanele ibhegi le-backhoe ligxile kuyo lapho kuhlanzwa?
I-backhoe Loader isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokwakha. Okwimboni yethu yesimanje yokwakha, kuwumsebenzi wami futhi ukuba nemishini yokwakha engabizi kakhulu Esikukhathalelayo ukuthuthukiswa komthwalo we-backhoe nebhodi elifushane elizosetshenziswa kamuva, kanye nezinkinga zethu zakamuva zokusebenzisa lezo backhoe l .. .
Yini okufanele siyinake lapho sisebenzisa amaloli e-forklift?
Izinto ezidinga ukunakwa lapho usebenzisa amaloli we-forklift zifaka: 1. Ekusetshenzisweni kwamaloli we-forklift, ukunakekelwa okukhethekile kufanele kunikezwe ekushajisweni kwebhethri ngesikhathi esifanele nokunakekelwa okufanele kwebhethri. Naka indlela lapho ushaja ibhethri lokugcina eligcwaliswe ngokuphelele ngaphandle kwe-ov ...
Yini okufanele inakwe ngenjini ye-4 Wheel Drive Forklift Truck?
Iloli le-4 wheel drive forklift lingasisiza ukuxazulula izinkinga eziningi zokuhamba, ikakhulukazi kwamanye ama-slabs amakhulu kasimende, ukhonkolo, njll. Iloli eline-4 wheel drive forklift livame ukusetshenziselwa ukwakhiwa kwendawo yokwakha kanye ne-r ...
Ungakunciphisa kanjani ukusetshenziswa kwamandla okungadingekile ngesikhathi sokumba
Okokuqala, nciphisa ukulahleka kwamandla okungadingekile. 1. Ukusetshenziswa nokuvikelwa okulungile kwamapayipi okukhipha uwoyela nezimbumbulu, kufaka phakathi ukususwa kaningi kukakhokho kuzinto zokuthambisa, ukulungisa okungakafiki isikhathi kwezingqwembe ezonakele, asikho isidingo sokufaka amapayipi wokukhipha amanzi aya phambili, asikho isidingo sokwenziwe okuzenzekelayo namapayipi amade wokukhipha, njll. 2.Ke ...
Ubuchwepheshe ukukhiqiza okuyinhloko, lo mshini wokuxuba ukhonkolo uyakwenza ngempela
Ijubane lobunjiniyela baseChina lidume kakhulu emhlabeni, futhi imishini yobunjiniyela esezingeni eliphakeme idlala indima ebalulekile. Isihlanganisi seloli le-WIK sishintsha ngokuphelele ukukhiqizwa kokhonkolo. Inqubo esebenza kahle futhi ehlakaniphile yenza ukukhiqizwa kube lula futhi kube lula. Ukondla, ukukala isisindo nokuxuba umjovo waManzi kunga ...
Kungani le mixers ye-Self Loading Concrete ithandwa kangaka
Ukwethulwa kwe-Concrete Mixing Machines kuvule indlela entsha yokusebenzisa ukhonkolo kumaphrojekthi amancane naphakathi, okuyonga futhi kulula, futhi amaphrojekthi amaningi amancane naphakathi nendawo athenga kulo msebenzi. Phakathi kwamaloli amaningi wokuzilayisha ahlukile, leli loli lokuxuba v ...
Abasebenzi bakulawula kanjani ukusebenza kwe-Self Loading Concrete Mixers_Yenziwa kanjani i-Self Loading Concrete Mixers?
1. Ngemuva kokukhipha lapho kwakhiwa khona, shayela ngokushesha i-feed hopper, ukhiphe i-hopper, bese ukhipha isigaxa ngepayipi eliza neloli lokuxuba ukususa udaka nokhonkolo onamathele emzimbeni. Emuva Endleleni ebuyela esiteshini sokuxuba, u-150—200L wamanzi kufanele abe ...
Isicoci se-Excavator, Isixhumi Sokukhonkolo Esizimele, Mini Isondo Loader, Ibhakede Isondo Loader, Isondo Loader, Lw300kn Isondo Loader,